War Lama filaan ah oo kasoo kordhay Qorshaha uu Turkiga 10 kun oo Guri uga dhisayo Muqdisho | Baahin -News, Sports, Views, Entertainment, War On Terror, Health and Social Affairs
War Lama filaan ah oo kasoo kordhay Qorshaha uu Turkiga 10 kun oo Guri uga dhisayo Muqdisho
Mudane Saadiq C/llaahi Cabdi Wasiirka Howlaha Guud iyo dib u dhiska Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in dhismayaasha guryihii dawladda Turkigu balan qaaday inay Muqdisho ka hirgalinayso qorshahoodu marayo meel fiican.
Wasiirka hawlaha guud iyo dib u dhiskaSoomaaliya oo ku sugan magaalada Ankara ee dalka Turkiga ayaa kulan la qaatay mas’uuliyiin ka tirsan dawladda Turkiga Isagoo kala hadlay sidii Soomaaliya looga caawin lahaa xagga dhib u dhiska Dalka.
Saadiq Cabdulahi Cabdi wasiirka hawlaha guud, dib u dhiska ayaa sheegay in dawladda Turkiga iyo hay’adaha shacabka Turkigu ay diyaar u yihiin inay Soomaaliya ka gacan siiyaan dib u kabashada dalka.
Inta uu ku sugan yahay Dalka Turkiga waxaa uu Wasiirku sidoo kale la kulmi doonaan madax kala duwan oo ka tirsan hay’adaha Soomaaliya taageera ee Turkiga laga leeyahay iyo mas’uuliyiinta Dowladda,kuwaasi oo kala hadlayo sidii Wasiiraddiisa looga gacan siin lahaa gudashada Waajibaadka ka saaran dib u dhiska Soomaaliya.
Dowladda Turkiga oo kamid ah wadamada ugu horeeya oo taageerada la garabtaan Soomaaliya ayaa horey u balan qaaday in ay Muqdisho ka dhisi doonto ilaa 10,000kun oo guryo ah kuwaasi oo loogu talagalay shaqaalaha Dowladda.